Umtshini wokuPakisha Umshini, Umshini wokuPakisha weMpahla, Ukubala uMveliso woMatshini wokuPakisha
Gxininisa ekupaketheni ubugcisa bee-hardware izesekeli.Ukuqulunqa nokucwangciswa kwezixhobo ezingaqhelekanga ngokweemfuno zabathengi. Siphumelele ukuphumeza ubunzima obuninzi bokusebenza ngokusebenzisa ubuchule bokubala nokubala kubaxhasi abaninzi.
Ukuphuhlisa kuze kube ngoku, uFiyu uye wabamba ngempumelelo kwimiboniso ngamaxesha amaninzi, njengefenitshala, izibophezelo njl njl., Ngexesha elinye, umboniso ohambelanayo usinika isicwangciso esihle sokusebenzisana phakathi kwamakhasimende nathi.
Ukuwamkela ngokukhawuleza abathengi ukuba batyelele, umshini wethu wokupakisha uzuze uxabiso kunye nokudumiseka kwabathengi abaninzi ekuthembekeni nasekuzinzileyo, abathengi bamaShayina nakwamashishini angaphandle bavame ukutyelela inkampani yethu.
I-Shanghai Feiyu yokupakisha imishini Co., Ltd., esungulwe kwi-2008, iye yazinikela ekubaleni nasekupakeni umenzi womatshini. Ngomnyaka wemigudu ekhutheleyo kuphando lobugcisa kunye nokukhuthazwa kwekhwalithi, i-Feiyu- Pack iye yaba ngumenzi woomatshini wokupakisha umatshini kunye nomsasayeli e-Asia.
Iimpahla ezincinci zeBlue Hardware zibala Umshini wokuPakisha
Amanqaku amancinane eengxowa zeengxowa zeenkcukacha zokubala umatshini wokupakisha 1-Ukubala umshini wokupakisha umshini 1.1-Mechanical counting Le ndlela ifanelekile ukupakisha amanani amancinci (1-12pcs / isikhwama), usebenzisa umgama ochanekileyo phakathi kokufakwa, kwaye ulungelelanise umbhobho kude kube kude, ukwenza ukubala. Le ndlela ayifanelanga ukubala okukhulu, ...
I-Automatic Hardware Nut Bolt Ukubala Umshini Wokupakisha
Isalathisi esifutshane Le mishini yokupakisha i-nut nut yokubala ipake i-PLC ephambili kunye ne-photoelectric control system, ichukumisa isikrini kwintetho yesiTshayina nesiNgesi, kunye nokugqibezela ngokuzenzekelayo ukulinganisa, ukukhwa kweebhokisi, ukuzaliswa, ukutywinwa, ukusika nokushicilela ikhowudi. Lo matshini ungumxhobo wokupakisha ohlangeneyo, enye inxalenye yokubala kunye ...
Umshini wokuPakisha oMatshini wokuBala oPhezulu
Lo matshini usebenza kwi-screw, nut, i-washer kunye nezinye izinto eziqhelekileyo, ukufumana ukubala okubala kunye nokuhlolwa kwe-fiber optics, ukubala kwe-fiber optics, ukulinganisa kunye nokubala kwe-fiber optics. zikhethiweyo izinto.Ukuhlelwa komyalelo wokubala, ukubala, ukupakisha nokuprinta nakho kunika. Ndixhotywe ...
Idilesi: I-NO33, iLane 3238, i-waiqingsong Road, i-Baihe Idolophu, isithili saseQingpu, iShayin, eChina
Umbhobho wokupakisha ibhokisi
Umshini wokuPakisha we-fastener
Ukukhangela Umshini Wokupakisha
I-2 Bowls I-Screw Counting Machine Packing With Printer
Umatshini wokubala weMpahla yokuPakisha
I-Carton Hardware Accessories Ukulinganisela Umshini Wokupakisha
Umgca wokupakisha iMashini yeeBholts Nuts
I-Pack Packing Machine Accessories Idivayisi
Izixhobo zeQumrhu leMpahla yokuPakisha - I-Hinge Counting Packing Machine
Umshini wokuPakisha weNut neBolt ngeCarton
Gxuma umshini wokupakisha kwiBili kunye nebhokisi